Mwari anoda kuti tigare murugare uye tichifara muparadhiso pasi pano nokusingaperi!
Zvisinei, ungabvunza kuti, ‘Izvozvo zvingaitika sei?’ Bhaibheri rinoti Umambo hwaMwari huchaita kuti zviitike, uye kuda kwaMwari kuti vanhu vose vadzidze nezveUmambo ihwohwo uye chinangwa chake kwatiri.—Pisarema 37:11, 29; Isaya 9:7.
Mwari anoda kuti tibatsirike.
Sezvinongoita baba vakanaka vanoshuvira vana vavo kuti zvivafambire zvakanaka, Baba vedu vekudenga vanoda kuti tifare nokusingaperi. (Isaya 48:17, 18) Vakavimbisa kuti uyo “anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi.”—1 Johani 2:17.
Mwari anoda kuti tifambe mumakwara ake.
Bhaibheri rinoti Musiki wedu anoda ‘kutirayiridza nezvenzira dzake’ kuitira kuti ‘tifambe mumakwara ake.’ (Isaya 2:2, 3) Akaronga “vanhu vezita rake” kuitira kuti kuda kwake kuzivikanwe pasi rose.—Mabasa 15:14.
Mwari anoda kuti tibatane pakumunamata.
Pane kuti kuparadzanise vanhu, kunamatwa kwaJehovha kwakachena kunovabatanidza murudo rwechokwadi. (Johani 13:35) Nhasi ndivanaani vari kudzidzisa varume nevakadzi kwose kwose kuti vangashumira Mwari sei vakabatana? Tinokukumbira kuti udzidze uchishandisa bhurocha rino.
Dzidza Bhaibheri nesu. Wakatotanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha here? Kana usati, ungada here kudzidza Bhaibheri? Hapana chaunobhadhara. Uchaona kuti inzira yakanaka yokuti uswedere pedyo naMwari.
Wana mabhuku usingabhadhari. Unogona kuenda paImba yoUmambo yekwaunogara kana kukumbira mumwe weZvapupu zvaJehovha kuti akupe bhuku remutauro wako richakubatsira kuti unzwisise Bhaibheri.
Dzidza nezvedu paIndaneti. Enda panzvimbo yepaIndaneti inobudisirwa mashoko zviri pamutemo neZvapupu zvaJehovha pawww.jw.org. Ipapo unogona kuverenga Bhaibheri mumutauro waunonzwisisa uye kuona zvakawanda zvezvinyorwa zvedu mumitauro inopfuura 750 kana kuzvipirinda.